Football Khabar » उल्भ्सले म्यानचेस्टर सिटीलाई उसकै घरमा गर्‍यो ‘रामधुलाइ’ !
उल्भ्सले म्यानचेस्टर सिटीलाई उसकै घरमा गर्‍यो ‘रामधुलाइ’ !
साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले घरेलु लिग इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अर्को लज्जास्पद हार भोगको छ । आज भएको लिगको आठौं खेलमा सिटी आफ्नै घरेलु मैदानमा पाहुना टोली उल्भ्ससँग ०–२ ले स्तब्ध बन्यो ।
यो हारसँगै सिटीलाई उपाधि होडमा गम्भीर झट्का लागेको छ । ऊ अब लिग लिडर लिभरपुलभन्दा समान खेलपछि स्पष्ट रूपमा ८ अंकले पछि परेको छ । आजको खेल जितेको भए सिटीले लिभरपुलसँगको अंक दूरी ५ मा झार्ने थियो ।
आफ्नो घरमा भ्रमणकारी टोलीले पाएका दुइटै मौकामा गोल गर्दै खेल जित्यो । उल्भ्सले सिटीविरुद्ध जम्मा ७ सट होनकोमा मात्रै २ सट टार्गेटमा राखेको थियो । र, उसका दुवै सट गोलमा परिणत भए । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो ।
तर, दोस्रो हाफको अन्तिम १० मिनेटमा उल्भ्स सिटीमाथि एकाएक हाबी भयो । उल्भ्सका लागि अडामा ट्राओरे नायक बने । २ वटै गोल उनैले गरेका हुन् । उल्भ्सका लागि ८०औं मिनेटमा अडामाले पहिलो गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई झट्का दिएका थिए । त्यसपछि सिटी लगातार खेलमा फर्किन संघर्षरत रह्यो । तर, उसका कुनै प्रयास सफल भएनन् । उल्भ्सको उत्कृष्ट रक्षापंक्तिसामु सिटीका कुनै पनि फरवार्ड चलेनन् ।
सोहीक्रममा इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा सिटीले दोस्रो गोल खायो । सो गोल पनि अडामाले नै गरे । उनको गोलपछि सिटीको खेलमा फर्किने बाटो बन्द भयो । र, खेल उभ्ल्सले ०–२ ले जित्यो । आजको खेलमा सिटीले कूल १८ सट हान्दा मात्रै २ सट टार्गेटमा राख्यो । उसले ७७ प्रतिशत बल आफ्नो नियन्त्रण्मा राखे पनि गोल गर्न सकेन ।
यो जितसँगै उल्भ्सले ८ खेलबाट १० अंक जोडेर लिगको ११औं स्थानमा चढेको छ । पराजित सिटी भने १६ अंकसहित दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ । शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलको २४ अंक छ । उसले लिगका सबै खेल जितेको छ ।
प्रकाशित मिति १९ आश्विन २०७६, आईतवार २१:२१